Mpamatsy fonosana famenon-java-bidy roa Hopper mora vidy | YiZheng
Inona no masinina fonosana roa Hopper Quantitative Packaging?
ny Masinina fonosana avo roa heny Hopper dia milina fandefasana milanja mandeha ho azy mety amin'ny varimbazaha, tsaramaso, zezika, simika ary indostria hafa. Ohatra, ny famonosana zezika granular, katsaka, vary, varimbazaha ary voa voa, fanafody, sns. Araka ny zavatra takinao, ny lanjan'ny fonosana 5kg ~ 80kg. Ny milina famenoana sy famonosana habetsahana dia misy ampahany efatra: fizarana mandeha ho azy, fampitaovana fitaovana, fitaovana fanaovana tombo-kase ary fanaraha-maso ny solosaina. Izy io dia manana ny mampiavaka ny firafitra antonony, ny fisehoany tsara tarehy, ny fandidiana milamina, ny fitsitsiana angovo ary ny fandanjana marina. Ny motera lehibe dia mandray propulsion boribory avo roa heny, refy fandrefesana varingarina roa, teknolojia fanaraha-maso fanodinana haavo nomerika mandroso, haitao fanodinana santionany ary teknolojia manohitra ny fitsabatsabahana mba hahazoana fanonerana diso sy fanitsiana.
Volavola namboarina ho takiana manokana aminao
Fitaovana milina azo aidina raha ny fangatahanao: vy vy, vy tsy misy fangarony 304 / 316L, na faritra mifandraika amin'ny akora matevina dia vy vy.
Endri-javatra an'ny Double Hopper Quantitative Packaging Machine
1.Ny famaritana ny fonosana dia azo ovaina, ny fandidiana dia tsotra ihany eo ambanin'ny fiovan'ny toe-piainana.
2.Ny faritra rehetra mifandraika amin'ny fitaovana dia vita amin'ny vy vy 304.
3.Ny totalin'ny lanjan'ny fonosana sy ny isan'ny kitapo voangona.
4. Famahanana sy fandrefesana namboarina manokana, fametahana sy famoahana entana. Mamonjy ny ampahatelon'ny ora fiasana ity, haingana ny hafainganam-pandehan'ny entana, ary avo ny fametahana fonosana.
5.Ny fampiasana sensor nohafarana, actuators pneumatika nafarana, asa azo antoka ary fikojakojana tsotra. Ny refy fandrefesana dia miampy na mihena roa arivo.
6.Manaparitaka be dia be, mazava tsara, miaraka amin'ny milina fanjairana mpampita izay azo atsangana sy ampidinina eo ambony latabatra, ny masinina iray dia misy tanjona sy mahomby be.
Fampisehoana horonantsary horonantsary Hopper Quantitative Double Hopper
Safidy maodely fonosana roa Hopper Quantitative Machine
Lanja milanja (KG)
Tombam-bidy fanondroana mikraoba (kg)
Isaky ny fotoana
≥100 Fanodinana namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa
fanamarihana Masinina fonosana mandeha ho azy
Masinja manjaitra, fanisana mandeha ho azy, fanapahana kofehy infrared, milina fanesorana ny sisiny, azonao atao ny misafidy arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa Masinina poloney boribory biolojika
Turner compost vita an-trano